Qarax & rasaas laga maqlay Magaalada Muqdisho - Awdinle Online
Qarax & rasaas laga maqlay Magaalada Muqdisho
Qaraxa oo jugtiisa laga maqlay degmooyin ka tirsan Gobolka Banaadir ayaa waxaa uu ka dhacay agagaarka Masjidak Turkiga oo ku yaalla wadada u dhaxeysa Isgoyska fagax & Xaafada jamhuuriya ee degmada Kaaraan.
Wararka la helayo ayaa waxaa ay sheegayaan in qaraxa uu ahaa miinada nooca dhulka lagu Aaso, isla markaana lala eegtay Ciidamo ka tirsan AMIOSM oo wadada ku socdaalayay , waxaana jira khasaaro ka dhashay qaraxa.
Ciidamada qaraxa lala eegtay oo wata Gaadiidka dagaalka ayaa waxaa goobjoogayaal sheegeen inay rideen rasaas farabadan, taas oo ay ku waxyeeloobeen dad Shacab ah.
Xilliga qaraxa lala eegnayay Ciidamada AMISOM ayaa waxaa la sheegay inay marayeen halka loo yaqaano Dabaqa Dhiiga oo u dhaw Masaajidka Turkiga oo dhanka Waqooyi ka xiga Isgoyska Fagax ee Muqdisho.
Previous articleGuddoomiyaha Gobolka Hiiraan oo digniin soo saaray
Next articleCiidamada ammaanka oo dad u xiray dil loo geystay Garsoore Maxkamadeed